Ezi zizezinye ezi-6 ezizezinye zeendlela zam eziBalulekileyo kwiiM Bookmark | Iindaba zeGajethi
Bonke abo bathanda imidlalo kwaye bafuna ukwazi iziphumo ezahlukeneyo eziveliswa mihla le, zihlala zinewebhu njengesalathiso Iibhukumaki zam.com, apho sinokufumana khona isixa esikhulu seziphumo ezibukhoma kunye nokwazi kuqala ukuhlelwa kwamaqela ahlukeneyo, iitafile zokuphelisa kunye nenani elikhulu lolwazi olufikeleleka ngokukhawuleza nangokulula.
Mhlawumbi sijonge eyona webhusayithi ilungileyo yolu hlobo, kodwa ayisiyiyo kuphela esinokubonisana nayo kwaye sihlala sinayo. Ngesi sizathu namhlanje siza kukubonisa kulo lonke eli nqaku ezinye iindlela ezingcono kwiiM Bookmark, ukuba le midlalo yebhayibhile iyasilela ngolunye usuku okanye ukuba ufuna umthombo wesibini wolwazi.
1 Kutheni le nto iiNqaku leNqaku lam ziliphepha lokuya phantse kuwo wonke umntu?
Kutheni le nto iiNqaku leNqaku lam ziliphepha lokuya phantse kuwo wonke umntu?
Ixesha elithile ngoku imismarcadores.com ibe liphepha lewebhu kubo bonke abo bafuna ukubonisana neziphumo ezibukhoma okanye kwanabo bafuna ukwazi ulwazi oluphangaleleyo ngawo nawuphi na umdlalo, phantse nawuphi na umdlalo.
Phambi kokuba kuqalwe umdlalo, umzekelo ibhola ekhatywayo, sinokujonga ukuhlelwa kwamaqela kwiligi nganye, imidlalo edlulileyo edlalwayo, kunye nokujongana phakathi kwabo, amaxhoba omdlalo, iingxwelerha ezinokubakho kunye nolwazi olongezelelweyo. Kubathengi, abambalwa, ikwabonelela ngolwazi malunga nokungangqinelani komdlalo kunye nolunye ulwazi.
Nje ukuba imidlalo, nokuba yeyiphi na imidlalo, idlalwe, zinokunikwa iindlela ezimbini. Eyokuqala kubo kukuba basinika ulwazi oluphilayo ngokwenzeka kwi-90% yamatyala okanye ukuba sinesiphumo kunye nolwazi olongezelelweyo kuphela xa umdlalo ugqityiwe. Apha ngezantsi siza kukubonisa zonke iifayile ze- Ulwazi olusibonisa xa umdlalo udlalwa bukhoma;
Isixa solwazi esinikwa ziMabhukhimakhi zam, zombini ngaphambi komdlalo, xa idlalwa, kwaye ekugqibeleni, kunzima kakhulu ukuyifumana nakwezinye iinkonzo zolu hlobo. Yintoni egqithisile Enye yeenzuzo ezinkulu edlala ngazo kukuba ulwazi olunikezelayo ngalo lonke ixesha luyinyani kwaye iimpazamo zinokubalwa kwiminwe yesandla esinye kumaxesha amaninzi.
Ewe, iiNqaku leNqaku lam linesicelo esifumanekayo sokukhuphela, simahla, izixhobo ezineenkqubo zokusebenza ze-iOS kunye ne-Android. Kuzo zombini iimeko zisebenza ngokugqibeleleyo kwaye zisivumela ukuba sazi ngexesha lokwenyani nasiphi na isiphumo semidlalo.
Umthuthukisi: I-FlashScore eSpain
Apha ngezantsi sikubonisa ezinye iindlela ezizezona ziBhukumaka zam esizifumeneyo kwaye kwezinye iimeko sisebenzisa yonke imihla;
LiveScore Ngenye yezona webhusayithi zidumileyo zolu hlobo kwaye ukhe wazisebenzisa ngamanye amaxesha, nangaphambi kokuba kusungulwe iiNqaku leMiqondiso. Ngaphandle kokuyilwa kwayo okulula, kwaye ngamanye amaxesha isinika isixa esikhulu seziphumo eziphilayo ezivela kwimidlalo eyahlukeneyo.
Njengoninzi lweenkonzo zolu hlobo, isinika ulwazi oluphilayo malunga nomdlalo, kwaye ihlala iwandisa ekupheleni kwawo.
Enye into elungileyo eya kwiiMabhukhmakhi zam kukukhetha inkonzo efanayo, nangona elinye igama lingafani kakhulu. Ukuba ujonga umfanekiso-skrini okhoyo ngaphezulu kwesi sicatshulwa, uya kukuqonda oko sithetha ngako. Kwaye kunjalo iziphumo.com Ikopi, asazi ukuba kusemthethweni okanye akukho semthethweni, kwiwebhusayithi yoqobo esifuna ezinye iindlela kweli nqaku.
Le webhsayithi isebenza ngokufanayo neyayimvelaphi, kunye nenxalenye efanayo ukuze ibe yinto ekhethekileyo kumaxesha athile, nangona isiluleko sethu kukuba kule meko uhlala ngokuthe ngqo kwiiMabhukhimakhi zam kwaye kungekhona ngeikopi ezingaqhelekanga.
Nge uyilo lolula kwaye ngaphandle kwawo nawuphi na umthwalo obonisa imifanekiso sidibene no AmanqakuPro, Esinika isixa esikhulu solwazi kwezemidlalo kunye neeligi ezibaluleke kakhulu emhlabeni.
Ngokungafaniyo neenkonzo ezininzi zolu hlobo, ulwazi kunye noyilo lwayo lulula kwaye lilinganiselwe ukusinika umdlalo kunye nesiphumo salo, kunye nexesha elidlulileyo, ngaphandle kokunikezela ngeenkcukacha ezithe kratya. Enkosi ngokulula kwayo, kunokuba kufanelekile ukubuza kwizikhangeli zewebhu eziphathwayo okanye ukuba asifuni kwazi ngaphezulu kwesiphumo somdlalo odlalayo.
Zimbalwa iinkonzo zeebhukumaka ezinokufikelela kwinqanaba leeNcwadana Zam, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo enye yezi isondela kakhulu SofaScore. Kwaye isinika ithuba lokubonisana nesixa esikhulu seziphumo ezahlukeneyo zemidlalo emininzi, ngolwazi oluninzi, kodwa ngakumbi Uncedo lokuba ibonelela ngohlobo olugqwesileyo lwesicelo seewatchwatches.
Isicelo esifumanekayo se-Android Wear senziwe ukuba sikhathalele zonke iinkcukacha zokugqibela, kwaye oko kusivumela ukuba sibe nesiphawuli esihlahleni esiya kuthi sisivumele ukuba sisazi isiphumo somdlalo esiwufunayo bukhoma.
Sofascore: Amanqaku aphilayoMahala
Iziphumo zebhola ekhatywayo-iSofaScore
Uninzi lweewebhusayithi eziphumeleleyo zihlala ziyilo ngononophelo, olusetyenziswa kakhulu ngabasebenzisi. Le yimeko ye bookmarksonline.com, ene uyilo olunomtsalane, lunyamekele ezantsi kweyona nkcukacha zincinci kwaye linenani elikhulu labasebenzisi abasisigxina enkosi kolu luyilo, kodwa nakwindlela elula ekubonelelwa ngayo, xa ubonakalisa iziphumo kwaye uzulazula kwinani elikhulu lolwazi olunikezelayo.
Kwimiba emibi sifumanisa ukuba asinakho ukubuza ulwazi oluninzi njengakwezinye iiwebhusayithi, kwaye loo nto banqunyelwe ekunikezeleni ulwazi kwimidlalo embalwa, nakwiligi ezifanelekileyo zamanye amazwe. Ukuba ufuna ukukhangela iziphumo ezivela kwiiligi ezingaziwayo kuluntu ngokubanzi okanye iziphumo kwezemidlalo ngasemva, ayisiyondawo yakho le.
Ukuba sinomdla kuphela kwiziphumo zehlabathi lebhola, ezinokuthi zigqibelele, umthombo omkhulu wolwazi unokuba ngu iphepha elisemthethweni leFIFA kunye ne-UEFA. Kwimeko yokugqibela, bajonge kufutshane inani elikhulu lemidlalo ebukhoma ngokusebenzisa ikhonkco elandelayo.
Enye yeenzuzo ezinkulu zale nkonzo kukuba isibonisa ulwazi olusemthethweni ngalo lonke ixesha kwaye umzekelo kwimeko yamanqaku abanakho ukuxoxa.
Ngawaphi amaphepha ewebhu okanye usetyenziso olibonisanayo mihla le njengezinye zeMiMhukumaki yam?. Sitshele kwisithuba esibekelwe ukuphawula kule post okanye ngayo nayiphi na inethiwekhi yoluntu apho sikhona kwaye ukuba siphoswa nayiphina into ebalulekileyo siza kubongeza kolu luhlu ukuze sonke sibe neyona midlalo ilungileyo .
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Eminye yeeNcwadana Zam
Molo kusasa kutheni iphepha lamancwadana ebekiwe lingasebenzi kwikhompyuter yam ukusukela nge-8 ka-Agasti.
INintendo "igcina" yenza abahlobo kwiYouTube